ဒီနှမှော ကစားသမားကောငျး မချေါဘူးဆိုတာ လီဗာပူးမှာ ရှိနကွေပွီးမို့ပါ ဆိုလာတဲ့ ယာဂငျ - Sports Home Time
Football News by Home Time Entertainment
ဒီနှမှော ကစားသမားကောငျး မချေါဘူးဆိုတာ လီဗာပူးမှာ ရှိနကွေပွီးမို့ပါ ဆိုလာတဲ့ ယာဂငျ
နှဈေေးကှကျမှာ ကစားသမား ချေါယူမှုတှကေို မြှျောလငျ့ကွမှာဖွဈပမေယျ့ လီဗာပူးမှာက ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိနှငျ့နပွေီးသားပါလို့ မနျနဂြောယာဂငျကလော့ပျက ပွောလာပါတယျ။
အသငျးတိုးတကျဖို့အတှကျ ကစားသမားသဈ ချေါယူမှုတှေ လုပျကွပမေယျ့ ချေါယူမှုအသဈတှအေတှကျ နရောရှိဖို့လညျးလိုပွီး ငှကွေေးလညျး သုံးရပါလိမျ့မယျလို့ ဂြာမာနျသားကွီးက ထုတျပွောခဲ့တယျ။ လီဗာပူးဟာ နှဈေေးကှကျကနေ ခံစဈမှူး ကိုနတေးကို ချေါယူထားကာ အခွားသော ချေါယူမှုတှအေတှကျ သတငျးကွီးမှုတှေ ရှိထားပမေယျ့ တရားဝငျ ခြိတျဆကျမှုတှေ ရှိမလာသေးပါဘူး။
ယာဂငျကလော့ပျက “ အခုက နှကောလပါ၊ ဈေးကှကျကလညျး ဖှငျ့နပေါတယျ။ ဒီတော့ လူတိုငျးက ကစားသမားအခြို့ကို လကျမှတျထိုး ချေါယူဖို့ မြှျောလငျ့ကွပါတယျ။ ဘာတှဖွေဈလာမယျဆိုတာကို ကနျြောတို့ ကွညျ့ရမှာပါ။
အခြိနျတိုငျးမှာ ပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျနဖေို့ လိုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့လိုလုပျဖို့လညျး နရောလှတျတှေ ရှိနဖေို့လိုပါတယျ။ ကနျြောတို့ ကစားသမားတှေ ပိုလာတာကို မလိုခငျြပါဘူး။ တဈနရောမှာ တဈခုခုဖွဈရငျတော့ ကစားသမား ချေါယူမှုလို တဈခုခုက ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကစားသမားတှေ ပိုမြားလာဖို့ ထညျ့သှငျးတာမြိုးက အဓိပ်ပာယျ မရှိပါဘူး။
လူစာရငျးကို ကွညျ့လိုကျရအောငျပါ။ အစှနျသမား အသဈတှေ ဝယျလိုတာလား? ဂိုးသမားသဈ ဝယျလိုတာလား? ကနျြောတို့မှာ ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိပွီးသားပါ။ ကစားသမားကောငျးတှေ ထပျလိုခငျြတယျဆိုရငျ ငှကွေေးတှေ အမြားကွီး သုံးစှဲရပါတယျ။ ကနျြောတို့ အဲ့လို လုပျဖို့ မလိုပါဘူး ဘာလို့လညျးဆိုတော့ ကနျြောတို့မှာ ကစားသမားကောငျးတှေ ရှိနှငျ့နပွေီးပါပွီ ” လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
ကလပျတှကေ ကိုယျစီကိုယျစီ ပွငျဆငျမှုတှေ ပွုလုပျနကွေတာဖွဈသလို လီဗာပူးအသငျးက ပရီးမီးယားလိဂျဖလား ပွိုငျဆိုငျမှုထဲ ဝငျပါနိုငျဖို့ ရညျမှနျးနကွေောငျးကို ယာဂငျက ဖှငျ့ဟခဲ့တယျ။
ယာဂငျက “ ကနျြောတို့က ဘောလုံးအသငျးကောငျးတဈသငျးဖွဈပါတယျ ဒါကို ကနျြောတို့အားလုံး သိထားပါတယျ။ ဘယျအသငျးက အကောငျးဆုံးလဲတော့ ကနြျော မသိပါဘူး။ အသငျးတျောတျောမြားမြားကတော့ အကောငျးဆုံးတှထေဲဖွဈပွီး ပရီးမီးယားလိဂျဖလား ပွိုငျဆိုငျမှုအတှကျ ကနျြောတို့ကလညျး အကောငျးဆုံး ကွိုးစားရပါမယျ။
အခွားသော အသငျးတှကေ နှဈေေးကှကျမှာ ကစားသမားကောငျးတှေ ချေါယူနတေယျဆိုတာ သူတို့မှာ ကွီးမားတဲ့ ရညျမှနျးခကျြတှေ ရှိနလေို့ဆိုတာ ရှငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနျြောတို့ကလညျး ရညျမှနျးခကျြကွီးတှေ ရှိထားပွီး အကောငျးဆုံး ကွိုးစားသှားမှာ ဖွဈပါတယျ ” လို့ ဆိုသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ZAWGYI – နွေဈေးကွက်မှာ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုတွေကို မျှော်လင့်ကြမှာဖြစ်ပေမယ့် လီဗာပူးမှာက ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိနှင့်နေပြီးသားပါလို့ မန်နေဂျာယာဂင်ကလော့ပ်က ပြောလာပါတယ်။
အသင်းတိုးတက်ဖို့အတွက် ကစားသမားသစ် ခေါ်ယူမှုတွေ လုပ်ကြပေမယ့် ခေါ်ယူမှုအသစ်တွေအတွက် နေရာရှိဖို့လည်းလိုပြီး ငွေကြေးလည်း သုံးရပါလိမ့်မယ်လို့ ဂျာမာန်သားကြီးက ထုတ်ပြောခဲ့တယ်။ လီဗာပူးဟာ နွေဈေးကွက်ကနေ ခံစစ်မှူး ကိုနတေးကို ခေါ်ယူထားကာ အခြားသော ခေါ်ယူမှုတွေအတွက် သတင်းကြီးမှုတွေ ရှိထားပေမယ့် တရားဝင် ချိတ်ဆက်မှုတွေ ရှိမလာသေးပါဘူး။
ယာဂင်ကလော့ပ်က “ အခုက နွေကာလပါ၊ ဈေးကွက်ကလည်း ဖွင့်နေပါတယ်။ ဒီတော့ လူတိုင်းက ကစားသမားအချို့ကို လက်မှတ်ထိုး ခေါ်ယူဖို့ မျှော်လင့်ကြပါတယ်။ ဘာတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို ကျနေ်ာတို့ ကြည့်ရမှာပါ။
အချိန်တိုင်းမှာ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့လိုလုပ်ဖို့လည်း နေရာလွတ်တွေ ရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ကျနေ်ာတို့ ကစားသမားတွေ ပိုလာတာကို မလိုချင်ပါဘူး။ တစ်နေရာမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ ကစားသမား ခေါ်ယူမှုလို တစ်ခုခုက ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကစားသမားတွေ ပိုများလာဖို့ ထည့်သွင်းတာမျိုးက အဓိပ္ပာယ် မရှိပါဘူး။
လူစာရင်းကို ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ အစွန်သမား အသစ်တွေ ဝယ်လိုတာလား? ဂိုးသမားသစ် ဝယ်လိုတာလား? ကျနေ်ာတို့မှာ ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိပြီးသားပါ။ ကစားသမားကောင်းတွေ ထပ်လိုချင်တယ်ဆိုရင် ငွေကြေးတွေ အများကြီး သုံးစွဲရပါတယ်။ ကျနေ်ာတို့ အဲ့လို လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျနေ်ာတို့မှာ ကစားသမားကောင်းတွေ ရှိနှင့်နေပြီးပါပြီ ” လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
ကလပ်တွေက ကိုယ်စီကိုယ်စီ ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်သလို လီဗာပူးအသင်းက ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ပြိုင်ဆိုင်မှုထဲ ဝင်ပါနိုင်ဖို့ ရည်မှန်းနေကြောင်းကို ယာဂင်က ဖွင့်ဟခဲ့တယ်။
ယာဂင်က “ ကျနေ်ာတို့က ဘောလုံးအသင်းကောင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကို ကျနေ်ာတို့အားလုံး သိထားပါတယ်။ ဘယ်အသင်းက အကောင်းဆုံးလဲတော့ ကျနော် မသိပါဘူး။ အသင်းတော်တော်များများကတော့ အကောင်းဆုံးတွေထဲဖြစ်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလား ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက် ကျနေ်ာတို့ကလည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားရပါမယ်။
အခြားသော အသင်းတွေက နွေဈေးကွက်မှာ ကစားသမားကောင်းတွေ ခေါ်ယူနေတယ်ဆိုတာ သူတို့မှာ ကြီးမားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ရှိနေလို့ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနေ်ာတို့ကလည်း ရည်မှန်းချက်ကြီးတွေ ရှိထားပြီး အကောင်းဆုံး ကြိုးစားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ” လို့ ဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
မကျဆီ ချေါယူမှု အပါအဝငျ ဥရောပဘောလုံးလောကကို ကိုငျလှုပျခဲ့တဲ့ အတှဲလိုကျ ချေါယူမှု (၄) ခု
စတငျတော့မယျ့ ပရီးမီးယားလိဂျအတှကျ ကလပျတှရေဲ့ လှုပျရှားမှုနဲ့ ဒီကနညေ့ ဘောလုံးသတငျးမြား